Tantara: Niverina ho any An-danitra i Jesosy - Tranonkala Ofisialin’ny Vavolombelon’i Jehovah
Tsaroanao ve hoe inona moa ny fanjakan’Andriamanitra? Eny, ny Fanjakana dia ﬁtondram-panjakana tena misy an’Andriamanitra any an-danitra, ary i Jesosy no ilay noﬁdin’Andriamanitra mba ho mpanjaka. Araka ny efa nianarantsika, i Jesosy dia nampiseho fa ho mpanjaka mahatalanjona aoka izany izy rehefa hanome hanina ny noana, hanasitrana ny marary, ary hanangana mihitsy ny maty ho amin’ny ﬁainana aza!
Inona moa ny Fanjakan’Andriamanitra, ary hanao ahoana ny ﬁainana eto an-tany, rehefa hanjaka mandritra ny arivo taona i Jesosy?
Nandritra ny ﬁry andro i Jesosy no niseho tamin’ny mpianany? Tsy maintsy nanao inona anefa izy taorian’izay?
Hatraiza no hanaovana ny asa ﬁtoriana, araka ny nambara mialoha ao amin’ny Asan’ny Apostoly 1:8? (Asa. 6:7; 9:31; 11:19-21; Kol. 1:23)